Fanapahan-kevitra - Mitodika any amin'Andriamanitra - Fiangonan'Andriamanitra manerana izao tontolo izao Soisa
haino aman-jery > Journal succession > 2016-04 mpandimby ny Magazine > Fanapahan-kevitra - hijery an'Andriamanitra
Lehilahy malemy fanahy i Mosesy. Andriamanitra no nifidy azy hitarika ny Isiraely hivoaka avy any Egypta. Nozarainy ny Ranomasina Mena. Nomen'Andriamanitra azy ny Didy Folo. Ny olona tao an-dainy izay nahita fahitana an'i Mosesy indraindray rehefa nandalo azy ireo dia angamba nilaza hoe: Ity dia izy. Io dia Mosesy. Etsy izy. Mpanompon'Andriamanitra izy. Lehilahy matanjaka sy matanjaka izy. ”Fa ahoana kosa raha tsy ny fotoana nahitany an'i Mosesy ihany no nahatafintohina azy ka namely ny vatolampy tamin'ny tehiny. Avy eo dia hieritreritra izy ireo hoe olona tezitra. Ahoana no ahafahan'Andriamanitra mampiasa azy? ”Davida dia olona araka ny fon'ny Andriamanitra. Nangataka ny sitrapon'Andriamanitra hamolavola ny fiainany araka izany izy. Noho ny fahatokiana an'Andriamanitra, novonoiny i Goliath goavambe. Nanoratra salamo izy. Andriamanitra no nifidy azy hisolo an'i Saoly ho mpanjaka. Rehefa nandalo ny fanjakany i David ary nahita olona nahita azy ny olona dia mety nilaza hoe: eo izy. Tsy iza izany fa i Davida Mpanjaka. Mpanompon'Andriamanitra izy. Izy dia lehilahy lehibe sy matanjaka !. Ahoana kosa raha ny fotoana nahitan'izy ireo an'i Davida dia rehefa nanao tsiambaratelo tamin'i Batsheba izy? Na rehefa nandefa an’i Oria vadiny ho eo anoloan’ilay ady hovonoina i Uria vadiny? Hilaza ve ianao avy eo hoe lehilahy tsy marina! Ratsy sy tsy mora setra izy! ”Ahoana no ahafahan'Andriamanitra mampiasa azy?
I Elia dia mpaminany malaza. Niresaka tamin'Andriamanitra izy. Izy no nampita ny Tenin'Andriamanitra tamin'ny olona. Niantso afo avy tany an-danitra ho et earth an-tany izy. Nanala barà ny Mpaminany Bala izy. Raha nahita maso an'i Elia ny olona dia nilaza tamim-pankasitrahana hoe: Ity no Elia. Izy dia lehilahy lehibe sy matanjaka. Mpanompon'Andriamanitra izy. Ahoana kosa raha tsy nisy ny fotoana nahitan'izy ireo an'i Elia rehefa nandositra an'i Jezebel izy na niery tao anaty zohy noho ny tahotra ny ainy. Hanao hoe: inona ilay kanosa! Satroka lamba izy. Ahoana no ahafahan'Andriamanitra mampiasa azy io? "
Ahoana no ahafahan’ireo mpanompon’Andriamanitra lehibe ireo hizara ny Ranomasina Mena indray andro any, hamono olona goavam-be na handatsaka afo avy any an-danitra, ary ho tezitra, tsy rariny, na hatahotra ny ampitso? Tsotra ny valiny: olombelona izy ireo. Eo no mipetraka ny olana amin’ny fiezahana hanao sampy amin’ny mpitondra Kristiana, namana, havana, na iza na iza. Olombelona daholo ianareo. Manana tongotra vita amin'ny tanimanga izy ireo. Handiso fanantenana anay ianao amin'ny farany. Izany angamba no mahatonga an’Andriamanitra hilaza amintsika hoe aza mampitaha ny tenantsika amin’ny hafa ary tsy mitsara ny hafa (2. Korintiana 10,12; Matthew 7,1). Tsy maintsy mibanjina an’Andriamanitra aloha isika. Avy eo isika dia tsy maintsy mijery ny tsara amin’ireo izay manompo sy manaraka azy. Ahoana no ahafahantsika mahita ny olona iray manontolo raha ny ampahany kely aminy ihany no hitantsika? Andriamanitra irery ihany no mahita ny olona manontolo sy amin’ny fotoana rehetra amin’ny fiainany. Ity misy fanoharana manazava izany.
Nisy mpanjaka persianina taloha te-hampitandrina ny zanany lahy mba tsy handray fanapahan-kevitra haingana. Noho ny baikony, ny lahimatoa dia nandeha nandritra ny ririnina mba hahita hazo mango. Tonga ny lohataona ary ny zanany manaraka kosa dia nalefa tamin'ny dia mitovy. Ny zanany fahatelo dia nanaraka ny fahavaratra. Rehefa niverina avy tamin'ny dia tamin'ny fararano ny zandriny lahy tamin'ny fararano dia nantsoin'ny mpanjaka ny zanany lahy ary ny hazo notantarainy. Hoy ny voalohany: Toa ny kitay may no tranainy. Niresaka indray ny faharoa: toa maloto sy toa voninkazo tsara tarehy izy. Ny fahatelo nanazava hoe: Tsia, manana raviny mahafinaritra izy. Ny fahefatra hoy: Samy diso daholo ianareo, misy voankazo toa voanjo. Marina daholo izay lazainao hoy ny mpanjaka: satria samy nahita ilay hazo tamin'ny fotoana hafa ianao tsirairay! Ary ho antsika, rehefa maheno ny eritreritry ny hafa na mahita ny fihetsik'izy ireo isika dia mila mihazona ny fitsarana antsika mandra-pahafantarantsika fa efa azontsika ny zava-drehetra. Tadidio fa anganongano. Isika dia tsy maintsy mahita ilay hazo amin'ny fotoana rehetra.